यो ब्लग पोष्टको योग्य छ ... धन्यवाद, क्याथी! | Martech Zone
यो ब्लग पोष्टको लागि योग्य छ ... धन्यवाद, क्याथी!
शनिबार, अप्रिल 7, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
केही समय अघि मैले मेरो दैनिक लिंकहरू मेरो साइटमा एकल ब्लग पोष्टमा राख्न सुरु गरें। मैले केहि कारणले गर्दा त्यसो गरें।
मसँग कुराकानीमा थप्नको लागि केहि छैन तर म निश्चित रूपमा मेरा पाठकहरूलाई जानकारीको यी थोरै 'रत्नहरू' फेला पार्न चाहन्छु।
अरु सबैले पहिले नै लेखेका कुरालाई म पुनःक्रमित गर्न चाहन्न। म तपाईलाई भन्न सक्दिन कि यो कत्ति निराश थियो र मेरो पाठकको पूर्व आईफोन, आईफोन र पोष्ट-आईफोनमा १०० फिडहरू मार्फत जान्छ। यदि यो मात्र पुनर्गठन हो भने, लिंक माथि फाल्नुहोस् र यससँग गर्नुहोस्।
मैले लिंकहरूको बारेमा कुनै गुनासो सुनेको छैन - सबै टिप्पणीहरू वास्तवमा सकारात्मक छन्। म आशा गर्दछु कि तपाईले यस तरिकाले मलाई मन पराउनु भएको जानकारी व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ।
यद्यपि यो पोष्ट फरक छ। म केवल कुनै नोट बिना यसलाई औंल्याउन सक्दिन। सबै ब्लगहरूमा मैले मेरो साइटबाट सन्दर्भ गरेको छु, उत्तेजक प्रयोगकर्ताहरू सिर्जना गर्दै अहिलेसम्म मेरो मनपर्नेहरू मध्ये एक हो।
यहाँ यो ब्लग कत्तिको शक्तिशाली छ भन्ने एक साधारण उदाहरण छ, क्याथी सियराले मेरो लागि पूर्ण संघर्ष गर्ने हरेक दिन दुईवटा साधारण दृश्यका साथ संर्घष गर्छ र कार्य गर्दछु।
र सहमति द्वारा सफ्टवेयरमा:
मैले धेरै ब्लगमा टिप्पणी गरें तर क्याथीले आफूलाई भेट्टाएको डरलाग्दो परिस्थितिमा लिंक गर्न अस्वीकार गरे। अर्को साइटमा क्याथीले केही स्तब्ध पार्ने र डरलाग्दो पोस्टहरू र धम्कीहरूको लक्ष्य गरे। म क्याथीको मुखमा शब्दहरू राख्न चाहन्न तर उनको लेखनबाट न्याय गर्दा यसले सबै कुरा परिवर्तन गर्यो। म केवल यो कल्पना गर्न सक्दछु कि यो के माध्यम बाट जान्छ जस्तो थियो र मेरो विचारहरू र प्रार्थनाहरू क्याथीसँग छन्।
क्याथीले ब्लगि leaving छोड्दैछ किनकि यसले ठूलो जोखिमले ल्याउँदछ। धेरै व्यक्तिहरूले क्याथीलाई उनको ब्लगको साथ जारी राख्न जोर दिइरहेका छन् तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि त्यो निष्पक्ष हो। क्याथी उनको ब्लगको साथ धेरै उदार थियो, यो आश्चर्यजनक थियो। ब्ल्गका सामग्रीहरू सजिलैसँग संस्करण वा दुई संस्करणमा बनाउन सकिन्छ पहिलो हेड पुस्तकहरू, तर यसको सट्टामा यी उत्कृष्ट विचारहरू नि: शुल्क हामीलाई दिइएको थियो।
धन्यबाद, क्याथी! यदि तपाईंको ध्यान एकल व्यक्तिलाई तपाईंको ब्लगमा मद्दत गर्ने वा परिवर्तन गर्ने हो भने, तपाईं मसँग सफल हुनुभयो। म तपाईंको अर्को जोश को प्रतीक्षामा छु! म तपाईंलाई तपाईंको ब्लगबाट सबै जानकारीहरू कम्तीमा पुस्तकमा कम्पाइल गरिएको हेर्न चाहन्छु। सायद तपाईंसँग एउटा बन्द सदस्यता मोडल साइट वा न्यूजलेटर हुन सक्छ जुन तपाईंलाई योग्य छ सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
सायद सफ्टवेयर उत्पाद विकास र व्यवस्थापनको लागि हेड स्टार्ट गाइड? ती २ छविहरू समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस् - उनीहरूले सम्पूर्ण कथा भन्छन्!
मैले आज मेरो बेसक्याम्प खाता रद्द गर्‍यो
अप्रिल 8, 2007 मा 12: 54 एएम
अधिक सहमति गर्न सकेन। क्याथीको ब्लग मैले सदस्यता लिएको सबैभन्दा पहिलो थियो, र यो त्यसबेलादेखि एउटा मणि साबित भएको छ। मलाई एक दर्जन भन्दा कम लेख पढ्ने र ठीक पछि "वाह" जाने सम्झन्छु। यो ती ब्लगहरू मध्ये एक हो जुन तपाईलाई कहिले कुनै ग्राहक - ग्राहक सम्बन्ध र सफ्टवेयर प्रयोगयोग्यताको गहिराई र समझको साथ चकित पार्न रोक्दैन।
सत्य भन, म साँच्चिकै गम्भीर रूपमा चित्त दु: खी छु जसले यो गरेको थियो र यसले अन्तमा आयो। मलाई लाग्छ हामी अब के गर्न सक्दछौं पुरानो सामानहरू खन्नुहोस् र सिक्नुहोस्, दयालु तपाईंले यहाँ गरेको जस्तो।